Google Mifananidzo yakagadziridzwa ichibatanidzwa neSpotlight | IPhone nhau
Google Mifananidzo inogadziridzwa nekubatanidzwa neSpotlight
Google Mifananidzo yave imwe yemashandisirwo akashandiswa, kwete paIOS chete asiwo paApple. Kubva payakatangwa uye nekutenda kune mukana we kukwanisa kuchengeta pasina muganho mifananidzo yese yatinotora Kubva pane kwedu kifaa, Google Mifananidzo ndiyo yakanaka application yekugara uine kopi yekuchengetedza yeese mafoto nemavhidhiyo atinotora needu iPhone iripedyo.
Iyo chete muganho wakaiswa pane yakanyanya resolution yemifananidzo kuti ugone kuchengeta kopi muGoogle gore. Ichi chisarudzo haifanirwe kunge iri huru kudarika gumi neshanu mpx. Neraki, iyo yepamusoro resolution yeiyo iPhone iri 12 mpx. Kana ari mavhidhiyo, kana tikanyora zvemukati mu4k ne iPhone yedu, Google inozoshandura vhidhiyo iyi kuti ive Full HD resolution Iwe haugone kuva nazvo zvese.
Google iri kutarisira kwazvo iyi application uye mwedzi wega wega unogamuchira yekuvandudza ichiwedzera mitsva mabasa. Iyi yazvino yekuvandudza inotipa kusangana neIOS Spotlight yekutsvaga injini, kuti tikwanise kutsvaga nenzira inokurumidza uye yakananga. Uye zvakare, yakanaka yekutsvaga bar yakawedzerwa mukati mekushandisa kunatsiridza kutsvaga.
Asi isu tinongoda seyipi yenziyo idzo Google inotipa izvozvi kuti tigadzire mafirimu, tinogona kushandisa nziyo dzatakachengeta pane yedu iPhone. Asi isu tinogona zvakare kuchinja zuva uye nguva yemifananidzo yatakatora ne iPhone yedu. Iri basa rakanakira kana isu tichida kuodha akateedzana emifananidzo zvichiteerana.
Chii chitsva mushanduro 1.10.0 yeGoogle Mifananidzo
Tsvaga mapikicha nekukurumidza nebhawa nyowani yekutsvaga, ikozvino nekutsvaga emoji.
Shandisa Kutarisisa kutsvaga ako mapikicha kubva kumba chidzitiro.
Wedzera ako mapikicha kune yakagovaniswa dambarefu pamwe chete pombi nekuda kwemazano akangwara.
Wedzera mimhanzi yako kumabhaisikopo.
Chinja zuva kana nguva yemufananidzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Google Mifananidzo inogadziridzwa nekubatanidzwa neSpotlight
Pindura kune avatar
Los Angeles Mapurisa Kuvhura iPhone 5s
Apple Music pane iOS 10: saka ndinovimba (uye ndinoshuva) kuti ive